မြို့ပြဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ ၁ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » မြို့ပြဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာငါ
ကုမ္ပဏီ: Sherwood ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာများ
Location: ဆန်ဖရန်စစ္စကို CA US
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ + သင်
Sherwood ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာများ: အင်ဂျင်နီယာ + ဂေဟဗေဒ + တီထွင်ဖန်တီး
သငျသညျရေရှည်တည်တံ့အင်ဂျင်နီယာများ၏ရှေ့တန်း join ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား Sherwood ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာများမြို့ 21 st Century built-in နေသောလမ်းကိုပြောင်းလဲနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောင်းလဲနေသော, မစ်ရှင်-မောင်းနှင်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအသင်း၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်စိမ်းလန်းတဲ့အနာဂတ်ဖို့သင်တန်းဇယားကိုကူညီပါ။
Sherwood ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာများတီထွင်ဆန်းသစ်, ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းဒီဇိုင်းမှတဆင့်အခြေခံအဆောက်အအုံသို့ဂေဟဗေဒနှင့်ရာသီဥတုခံနိုင်ရည်ပေါင်းစပ်ဖို့ကျူးလွန်ခဲ့သောနိုင်ငံတကာအရပ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်တန်းဒီဇိုင်းကိုအဆောက်အဦးမှာအလုပ်လုပ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအသင်းများကို, ရပ်ကွက်နှင့်မြို့စကေးနှင့်အတူကျနော်တို့ဖက်။ ကျနော်တို့ရေစီမံခန့်ခွဲမှု, ရေရှည်တည်တံ့သောရေစနစ်များ, အစိမ်းရောင်အဆောက်အဦးများနှင့်မြို့ပြဂေဟစနစ်စနစ်များအပါအဝင်ဆန်းသစ် site ကိုအင်ဂျင်နီယာအထူးပြုခေါင်းဆောင်မှု, ဆောင်ခဲ့ရမည်။
ကျနော်တို့ 20 နိုင်ငံများထက် ပို. ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာအင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်းများရာပေါင်းများစွာအပေါ်ဂေဟစနစ်-မြို့ပြဒီဇိုင်းနှင့်အတူအခြေခံအဆောက်အဦများလမ်းဆုံရှေ့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်မကြာခဏပထမဦးဆုံး-of ယင်း၏-ကြင်နာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများကိုတစ်ရောင်စဉ်မှအစိမ်းရောင်အခြေခံအဆောက်အအုံစနစ်များ, နည်းဗျူဟာများနှင့်သဘောတရားများကိုလျှောက်ထား၌တည်ရှိ၏။ ငါတို့သည်ဤလောကရဲ့ဦးဆောင်ဗိသုကာနှင့်ရှုခင်းဗိသုကာကုမ္ပဏီများနှင့်တွဲဖက်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးမြင့်မားဘက်ပေါင်းစုံအလွန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဒီဇိုင်းကိုကယ်နှုတ်တော်မူ။
2002 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုရစီမံကိန်းများကို New York မှာ Hudson ခြံ (အမေရိကန်သမိုင်းတွင်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကအိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးမှု), San Francisco က သာ. ကောင်း၏လမ်းများကိုစီမံချက်, မဟာ New Orleans မြို့ပြရေ Plan ကို, အအထင်ကရကမ်းနားဘရွတ်ကလင်းတံတားပန်းခြံ၏ပြန်လည်ရှင်သန်ရေးနှင့်ပါဝင်သည် ကွမ်ကျိုး, တရုတ်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် 35 စတုရန်းကီလိုမီတာ Baietan မြို့ပြဧရိယာ Plan ကို။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်-မောင်းနှင်ကုမ္ပဏီ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ဖို့အဆင်သင့်, ကြီးစွာသောသဘောထားကိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းရှာကြသည်။ ကျနော်တို့ရှုပ်ထွေးပြီးပြောင်းလဲနေသောနေ့က-to-နေ့ကတာဝန်ကျဖြေရှင်းနေစဉ်အတွင်းစိတ်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှုမြင်စောင့်ရှောက်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာကြ၏။ သင်တစ်ဦးခေါင်းဆောင်အဖြစ်နှင့်အဖွဲ့သည်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်လုပျကိုငျနိုငျရနျသငျ့သညျ။ ဒါကအချိန်ပြည့်, ကင်းလွတ်ခွင့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ လျော်ကြေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်ညှိနှိုင်းဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့သည် CA. ငါ San Francisco မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနချုပ်မှာအလုပ်လုပ် non-ကင်းလွတ်ခွင့်, အချိန်ပြည့်မြို့ပြဒီဇိုင်နာတစ်ချက်ချင်းလိုအပ်ပြီ သာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ (အဘယ်သူမျှမစက်မှု, ဘူမိ, ပတ်ဝန်းကျင်, ဓာတုသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ) လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်။
မရှိမဖြစ် Functions များ:
site ကိုငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်စပ်တွက်ချက်မှု Perform
utility ကို layout ကိုနှင့်ဆိုက် Perform
client ကိုအစည်းအဝေးများနှင့်စီမံကိန်း site ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူတက်ရောက်ရန်
ဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်ကိုစုံ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲမှုအတွက် redlines ပေး
လက် drawings နဲ့တင်ဆက်မှုပစ္စည်းများပြင်ဆင်ပါ
ရန်တာဝန်များကို assign နှင့်ပညာရှင်များသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းများနှင့်အတူညှိနှိုင်း
အထိခိုက်မခံကုမ္ပဏီများနှင့် client ကိုအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်လုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းထား
စီစဉ်နိုင်စွမ်း, စုစည်း, နှင့်ဦးစားပေး, ထိထိရောကျရော Multi-တာဝန်နှင့်အသုံးပြုမှုအချိန်
မျိုးစုံန်ထမ်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်မျိုးစုံ Team ကး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စိတ်အားထက်သန်
ပညာရေး / အတွေ့အကြုံ:
တစ်ဦး ABET / EAC အသိအမှတ်ပြုအစီအစဉ်မှလူထုအခြေပြုသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
အတှေ့အကွုံ 0-4 နှစ်ပေါင်း
ကွဲပြားခြားနားသောသြဒိနိတ်ဘောင်များနှင့်ကွဲပြားယူနစ်အတွက် oriented မျိုးစုံ site ကိုအခြေစိုက်စခန်းဖိုင်တွေနဲ့အတူလုပ်ကိုင်ဖို့နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်, Institutional နှင့်လူနေထိုင်ရာစီမံကိန်းများအပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးမှတ်တမ်းအတွေ့အကြုံကို။
MS Office ၏အလုပ်လုပ်ကိုင်အသိပညာ
ဂရစ်ဖစ်အစီအစဉ်များအသိပညာ (စသည်တို့ကို Adobe က Photoshop ကို, InDesign, Illustrator,)
GIS နှင့် Adobe ကဦးစားပေး၏အသိပညာ
(စသည်တို့ကိုမြို့ပြ 3D, LDT, ကို Hydro CAD, Flowmasters, မုန်တိုင်း CAD) ပိုမိုနှစ်သက်အရပ်ဘက်အစီအစဉ်များအသိပညာ
မှန်မှန်, ထိုင်ရပ်, လမ်းလျှောက်, အရာဝတ္ထု, tools များသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုခံစားရသို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ရန်လက်အားကိုသုံးပါ, လက်သို့မဟုတ်လက်နက်နှင့်အတူရောက်ရှိရန်လိုအပ်သည်။
ဝေးအနည်းငယ်ခွကေိုထက်လျော့နည်း / ပိုပြီးဖြစ်ကြောင်းအရာဝတ္ထုများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုပါ
နားထောင် understan နိုင်အောင်ရှင်းလင်းစွာအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ
SoftAtHome, MStar, CES2017 ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-09-30
ယခင်: Integrated ထုတ်လုပ်သူ
နောက်တစ်ခု: Software များအင်ဂျင်နီယာငါ